Ukuveliswa komatshini kunye nomatshini wokwenza i-China Oomatshini baseYoute
Umatshini igadi net ukwaluka eziveliswa efektri yethu luhlobo olutsha lwesinyithi umatshini ukwaluka umatshini neempawu zayo ezizodwa. Olu luhlu lweemveliso lusebenzisa itekhnoloji yokuluka wocingo, enokuvelisa ngokuthe ngqo iminatha yegadi eneenkcukacha ezifanelekileyo. Oomatshini abahlukeneyo kunye nezixhobo zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Isakhelo ikakhulu welding ngentsimbi ezikumgangatho ophezulu yesinyithi, kwaye amandla kubonelelwa yi-motor yombane. Umatshini igadi metal umatshini ukwaluka uneempawu kuyilo efanelekileyo, isakhiwo elula, ukusebenza ezinzileyo, intsebenzo elungileyo, kahle eliphezulu kunye nolondolozo lula.
Lo matshini unendawo yokwaleka kweengcingo kunye nenxalenye yokubeka ucingo. Umatshini ufuna abasebenzi ukuba basebenze.
Ingcaciso yoMatshini oPheleleyo weGadi
Izinto zegadi yomnatha: ucingo lwePVC, iplastikhi yocingo, inempawu zokumelana nokubola, ukubonakala okuhle kunye nokukhuseleka okusebenzayo
Imveliso isebenzisa izinto ezisemgangathweni ezikrwada, kwaye ifumene unyango olukhethekileyo kumhlaba, olumelana kakhulu nokubola. Imveliso egqityiweyo iyonwabela iminyaka elishumi yoqinisekiso lomgangatho.
Kulula ukuyifaka: Akukho zincedisi zikhethekileyo ziyafuneka kufakelo lwemveliso, kwaye indlela yohlobo lokutyhala iyamkelwa, ekulula ukuyibamba, elula kwaye ekhawulezayo, kunye nokunciphisa iindleko.
Ukuguqa ngokufanelekileyo kudala isiphumo esikhethekileyo sobuhle bayo le mveliso, kwaye umphezulu uphathwa ngemibala eyahlukeneyo, enje ngatyheli, luhlaza, nobomvu. Ukudityaniswa kwemibala eyahlukeneyo yekholamu kunye nomnatha kuyathandeka ngakumbi.
Inentsebenzo elungileyo yokulwa umhlwa, anti-ukwaluphala kunye nembonakalo entle. Ukufakwa kulula kwaye kuyakhawuleza. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwiingcingo, umhombiso, ukhuseleko kunye nezinye izibonelelo kumashishini afana noshishino, ezolimo, ulawulo lukamasipala, kunye nezothutho. Inempawu zokuchaneka kokucoca okuhle, ubuninzi bomthwalo kunye neendleko eziphantsi.
Egqithileyo ezinamacala umatshini wocingo
Okulandelayo: Umatshini wokubambisa amancinci
Umatshini wokuCoca weGabion
Isefu yeGabion Machine
Umatshini wocingo wokubiya